CADDAYN: Lionel Messi Muu Dhalinin Goolkiisii 400aad Ee Taariikhda Loogu Diiwaangeliyey Xalay – Cadalool.com
CADDAYN: Lionel Messi Muu Dhalinin Goolkiisii 400aad Ee Taariikhda Loogu Diiwaangeliyey Xalay
Lionel Messi ayaa xalay dhaliyey laba gool oo uu ku galay buugga taariikhda horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, kuwaas oo uu ku gaadhay tirada 400 gool oo uu ka dhaliyey intii uu u ciyaarayay Barcelona.
Messi ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee goolal intaas le’eg ka dhaliya horyaalka, waxaana caawiyey laba gool oo uu ka dhaliyey Eibar oo ay xalay kaga adkaadeen 3-0.
Daqiiqadihii 53aad ayaa uu Lionel Messi soo taabtay shabaqa Eibar, waxaana labada gool ee kale dhaliyey, laakiin goolkaas waxa uu ku gaadhay taariikhda uu doonayey inuu samaysto oo ah 400 gool oo horyaalka LaLiga oo kaliya ah.
Haddaba wargeyska Marca ayaa waxa uu soo bandhigay caddayn muujinaysa in Lionel Messi aanu weli gaadhin tirada 400 gool, in mid ka mid ah goolasha u qoran ee taariikhda loo geliyey anu isagu dhalinin laakiin uu si qaldan iskaga dhaliyey Fernando Amorebieta.
Waxay ahayd ciyaar 5-1 ay Barcelona kaga adkaatay Athletic Bilbao oo ahayd kulanka 14aad ee horyaalka xili ciyaareedkii 2012/13, markaas oo Lionel Messi uu laag awood badan ka jaray birta, kaddibna inta ay soo laabatay ay ku dhacday Amorebieta oo dib ugu celiyey shabaqiisa isaga oo isku dayey inuu goolkiisa badbaadiyo, waana goolkaas midka uu wargeysku tibaaxay inuu ka dhiman yahay Messi.
Inkasta oo garsoorihii ciyaartaas ee Antonio Miguel Mateu Lahoz uu goolkaas u qoray xiddiga reer Argentina, haddana caddaymo uu wargeyska Marca muujiyey ayaa waxay muujinayaan in goolkaasi ahaa mid ay Athletic iska dhalisay.
Wargeysku waxa uu isla xili ciyaareedkaas soo bandhigay gool uu dhaliyey uu dhaliyey Fernando Llorente oo haddana garsoorihii ciyaartu uu u qoray Gerard Pique oo ah inuu iska dhaliyey.
Si kastaba ha ahaatee, doodda wargeyska Marca ayaan waxba ka beddelaynin taariikhda loo diiwaangeliyey Lionel Messi.